साइप्रसमा सेफ हाउस स्थापना गर्न डेढलाख भन्दा बढी सङ्कलन | cyprus-nepal.com
कुवेत पठाइदिने भन्दै २५ जना महिलालाई श्रीलंका लगेर बेच्ने सावित्री जेल चलान
अब कोरोना टेस्ट गर्न १० युरो लाग्ने तर मंगलबार यहाँ हुन्छ नि:शुल्क कोभिड टेस्ट ?
अगस्ट १ देखि नि:शुल्क र्यापिड टेस्ट गर्न कसले गर्न पाउँछन् ? कति शुल्क लाग्छ ?
साइप्रसमा अब जहाँ पनि सेफपास, सोमबार बाट १२ वर्ष माथिलाई खोप लगाइने
गर्मीमा शरीरलाई शितल राख्न के-के खाँदा राम्रो हुन्छ ?
साइप्रसमा सेफ हाउस स्थापना गर्न डेढलाख भन्दा बढी सङ्कलन
Posted By: NewsRoom0Comment
चैत २९ – साइप्रसमा सेफ हाउस स्थापनाका लागि १ लाख ६६ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । नयाँ वर्ष २०७५ को अवसर पारेर अवैतनिक वाणिज्य दूतावासको संरक्षण तथा एनआरएन साइप्रसको आयोजनामा सांगीतिक कार्यक्रम गरेर रकम संकलन गरिएको हो ।
यहाँ नेपाली कामदारलाई परेको समस्या समाधान गर्न सेफ हाउस स्थापना गर्न लागिएको एनआरएन साइप्रसका अध्यक्ष सुवास मल्लले बताउनुभयो ।
साइप्रसमा समस्यामा परेका नेपाली कामदार, विद्यार्थीका समस्या बारे साइप्रस हेर्ने इजरायलमा रहेको नेपाली दूतावास तथा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा ताकेता गरेपनि खासै चासो नदिएको अध्यक्ष मल्लले गुनासो गर्नुभयो ।
संचालनमा आयो Safe House
इजरायलमा रहेको नेपाली दुतावासलाई धेरै पटक पत्राचार गरेपनि कुनै चासो नदिएको चितवन सेवा समाजकी अध्यक्ष जसु पुन मगरले बताउनुभयो ।
सांगीतिक कार्यक्रममा नेपाल आइडलका सागर आले मगर, दिपक राई बान्तवा, लोक पप गायक बिबि मल्ल ठकुरी तथा गायक गौरव नेपाल लगायतका कलाकारले आफ्नो प्रस्तुती दिएका थिए । कार्यक्रमबाट उठेको रकमबाट छिट्टै सेफ हाउस स्थापना गरिने एनआरएन अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो ।
श्रोत : ujyaalo online
साइप्रसमा ‘२ रुपैयाँ’ले खोल्यो खाता
दशैँ सांगीतिक उत्सब सम्पन्न
राज्यले प्राबसमा रहेका नेपालीहरु प्रती कुनै भेदभाब गर्दैन :- सुबास नेम्बाङ
04/10/2020 newsdesk 0
लिमासोलमा हिंसात्मक प्रदर्शन,प्रहरीको गाडी जलाइयो (फोटो भिडियो सहित )
29/10/2020 NewsRoom 0
27/07/2015 NewsRoom 0
कुवेत पठाइदिने भन्दै २५ जना महिलालाई श्रीलंका लगेर बेच्ने सावित्री जेल चलान 02/08/2021
अब कोरोना टेस्ट गर्न १० युरो लाग्ने तर मंगलबार यहाँ हुन्छ नि:शुल्क कोभिड टेस्ट ? 02/08/2021
अगस्ट १ देखि नि:शुल्क र्यापिड टेस्ट गर्न कसले गर्न पाउँछन् ? कति शुल्क लाग्छ ? 02/08/2021
साइप्रसमा अब जहाँ पनि सेफपास, सोमबार बाट १२ वर्ष माथिलाई खोप लगाइने 01/08/2021
गर्मीमा शरीरलाई शितल राख्न के-के खाँदा राम्रो हुन्छ ? 01/08/2021
दुई प्रेमिकालाई धोका नदिन दुवैसँग विवाह
26/07/2021 NewsRoom 0
काठमाण्डाै – भारतको छत्तिसगढको बस्तरमा एक जनाले एकै पटक दुई जनासित विवाह गरेका छन् । यो विवाह अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।
१७ वर्षीय किशोरको मुत्रथैलीबाट निकालियो एक किलोको पत्थरी
10/07/2021 NewsRoom 0
कतै तपाईंको ईमेल वा पासवर्ड लिक भएको त छैन ? यसरि चेक गर्नुहोस्।
पछिल्लो समय ह्याकिङ तथा डेटा लिकका घटना बढ्दै गएका छन् । यस्ता घटनामा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ईमेल तथा पासवर्ड लिक हुने गर्छ । यस्ता विवरण
पेगासस सफ्टवेयर : एक मिसकल वा खालि म्यासेज आउँदा पुरै मोबाइल ह्याक
23/07/2021 NewsRoom 0
फेसबुक, ह्वाट्एप, भाइबर, टेलिग्राम लगायत एपले तपाइका के-के व्यक्तिगत सूचना लिन्छन ?
17/07/2021 NewsRoom 0
सामाजिक सञ्जालमार्फत यसरी चोरिदैँछ तपाईंको डेटा